Sarkaal sare oo ka Tirsan Maamulka Puntland oo gaashaanka ku dhuftay in Xiisado Colaadeed ay ka jiraan Puntland – GOBOLADA.COM
May 24, 2022 May 24, 2022 AbdukadirLeave a Comment on Sarkaal sare oo ka Tirsan Maamulka Puntland oo gaashaanka ku dhuftay in Xiisado Colaadeed ay ka jiraan Puntland
Xilli maalintii shalay ay soo baxayeen warar sheegaya in xiisado dagaal ay kajirto deegaano katirsan Maamulka Puntland ayaa waxaa arintaasi ka hadlay xubno katirsan masuuliyiinta maamulkaasi.
Taliyaha Ururka Dayax ee Ciidanka Daraawiishta Puntland G/sare Mubaarak Maxamed Warsame ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay wararkaasi ku saabsan in uu isaga uu hogaaminayay Ciidanka Dhaqdhaqaaqa ka sameeyay magaaladaasi.
Taliyaha oo ka hadlayay arintaas ayaa sheegay in aysan jirin wax dhaqdhaqaaq ciidan ah oo lagu amray in uu sameeyo islamarkaana uu ku sugan yahay Taliska Faladhyaale halkaas oo fariisin u ah Ururka Dayax ee Ciidanka Daraawiishta Puntland.
Hadalka Taliyaha ayaa ku soo beegmay xilli saacadihii u danbeeyay la hadal haayay khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya Madaxda sare ee Puntland uu saamayn ku yeeshay Ururka Dayax ee Ciidanka Daraawiishta.
Dawlada Baruundi oo ka war bixisay Tirada Askarta looga dilay Degaanka Ceel baraf
Madaxweynaha Jubland oo soo gaaray magaalada Muqduisho+ Sawiro
May 7, 2022 May 7, 2022 Abdukadir